सोफिया को शंका: पर्खाल को पतन र स्पेनिश गृहयुद्ध बीच | वर्तमान साहित्य
बर्लिन पर्खालको पर्खाल
सोफियाको शंका (२०१)) स्पेनिश लेखक Paloma Sánchez-Garnica द्वारा बनाईएको एक ऐतिहासिक कथा उपन्यास हो। कथा २० औं शताब्दीको दोस्रो आधा को समयमा स्पेन र जर्मनी को दुई धेरै सान्दर्भिक अवधि को बीच चल्छ। एकातिर: म्याड्रिड मा ढिलो फ्रान्को शासन; अर्को मा: बर्षहरु जर्मन राजधानी मा बर्लिन पर्खाल को पतन भन्दा पहिले।
म्याड्रिड लेखक यस सन्दर्भ को लाभ उठाउँछन् स्पेनी गृहयुद्ध पछि महिलाहरुको भूमिका के थियो बताउनुहोस्। समानान्तर मा, कार्य १ 1961 to१ देखि १ 1989 Ber सम्म बर्लिन परिवारहरु लाई अलग कंक्रीट पर्खाल को आसपास जासूसहरु को एक रोचक साजिश को वर्णन गर्दछ। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ एक रोमाञ्चक र गहन प्रेम कहानी को नायक को लागी कोठा छ।
1 सोफिया को संदेह को सारांश
1.3 ऐतिहासिक क्षणहरु
2.1 कसरी सोफिया को कथा को जन्म भएको थियो
2.1.1 तपाइँको व्यक्तिगत अनुभव
2.1.2 प्रेरणा र शैलीहरु
3 लेखक को बारे मा, Paloma Sánchez-Garnica
सारांश सोफियाको शंका
मैड्रिड, 1968; फ्रान्कोको तानाशाही अन्तिम वर्षमा छ। त्यहाँ, डेनियल र सोफिया Sandoval एक विवाह फारम शान्त अस्तित्व संग। एकातिर, उहाँ वकिल Romualdo Sandoval को मात्र सन्तान हुनुहुन्छ, एक कानूनी फर्म को निर्देशक "Generalissimo" को लागी यसको आत्मीयता को लागी प्रसिद्ध छ। यो परिस्थिति पति मा उत्पन्न हुन्छ केहि जटिलहरु आफ्नो बुबा संग तुलना बाट व्युत्पन्न।
अर्कोतर्फ, सोफिया एक धेरै बुद्धिमान महिला हो, विज्ञान को लागी ठूलो क्षमता संग (यसको अतिरिक्त, उनको बुबा एक वैज्ञानिक हुनुहुन्छ)। तर, उनी That त्यस समयका महिलाहरुको विशाल बहुमत जस्तै— उनी आफ्नै निर्णयको स्वामित्वमा छैनन्। वास्तव मा, कुनै पनी परिवार वा निजी योजना पुरा तरिकाले तपाइँको रूढ़िवादी दिमाग पति को अनुमोदन मा निर्भर छ।
को दैनिक दिनचर्या सोफिया र ड्यानियल आफ्नो दुई छोरीहरु संग धेरै चिन्ता बिना एक धनी परिवार बाट हो। जे होस्, गहिरो तल, उनी होईन पूर्ण एक जोडी को रूप मा आफ्नो जीवन संग सन्तुष्ट। अझ धेरै, यो महिला उसको विश्वविद्यालय प्रशिक्षण टाढा आफूलाई विशेष गरी घरको काममा समर्पित गर्न र आफ्नो पतिलाई खुशी पार्न।
सबै परिवर्तन हुन्छ मौलिक रूपमा जब डेनियल एक पत्र प्राप्त परेशान गर्ने जानकारी संग अज्ञात प्रेषक बाट आफ्नो प्यारी आमा को बारेमा, बासस्थान। पत्र बताउँछ कि उनी उनको वास्तविक आमा होइनन्।... यदि उहाँ सत्य जान्न चाहानुहुन्छ, उनी तुरुन्तै पेरिसको यात्रा गर्नु पर्छ, उही रात। साथै, एक प्रमुख चरित्र पछिको घटनाहरु को लागी देखा पर्दछ: क्लाउस।
सोफियाको शंका ...
जानु भन्दा पहिले, दानियल उसले आफ्नो बुबालाई यस बिषयमा सोध्छ, तर पछिल्लोले सिफारिश गर्दछ कि उसले अतीतलाई एक्लै छोड्छ। जे होस्, Romualdo को चेतावनी मात्र उसको उत्तराधिकारी को अनिश्चितता बढाउँछ, जो यो हराउन धेरै समय लाग्दैन। यसरी, सोफिया युरोप को आधा भाग मा पत्ता लगाउन को लागी एक छिटो गती खोज शुरू गर्दछ कहाँ र विशेष गरी किन तपाइँको श्रीमान् गए।
पेरिसमा उनीहरु मुक्त छन् को अभिव्यक्तिहरु भनिन्छ फ्रेन्च - शायद - पश्चिमी यूरोप मा देखिएको सबैभन्दा ठूलो सामान्य हडताल। त्यो बिन्दुमा, पुस्तक विस्तार मा वर्णन गर्दछ को intrahistory समय को सम्पूर्ण सामाजिक राजनीतिक ढाँचा, न केवल गैलिक क्षेत्र मा, मुख्य रूप बाट बर्लिन मा पर्खाल द्वारा विभाजित र देर फ्रान्को म्याड्रिड मा।
KGB र Stasi को संलग्नता को कारण षडयन्त्रकारी तत्वहरु एक पहिले नै धेरै जटिल नेटवर्क को रहस्य मा जोड। त्यस्तै गरी, फ्रान्को शासन को सेवा मा खुफिया सेवाहरु एक पर्याप्त सहभागिता छ। यो सबै बिल्कुल ऐतिहासिक सेटिंग्स को Paloma Sánchez-Garnica को कुशल मनोरन्जन द्वारा पूरक छ।
स्पेनी लेखक को विशाल गुणहरु मध्ये एक उनको पात्रहरु को निर्माण मा निहित छ। यो अधिक छ, नायक को प्रतिनिधित्व एक वास्तविक व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक गहिराई छ। फलस्वरूप, पाठक सोफिया र डैनियल को भावनाहरु, साथै दुख, डर, गुण र कथा को सबै सदस्यहरु को दोष को रूप मा भरोसायोग्य मानीन्छ।
अन्तमा, (तार्किक) षडयन्त्र र जासूस षडयन्त्र को रहस्य निर्बाध सहअस्तित्व Sandoval जोडी को प्रेम को चलती विकास संग। बन्द गर्ने बाटो बाट, सोफियाको शंका एक सार्वभौमिक सन्देश छोड्छ: यदि एक व्यक्ति एक अधिनायकवादी शासन (फ्रान्को मा डैनियल, पूर्वी जर्मनी मा क्लाउज) मा दमनमा बाँचिरहेछ ऊ साँचो कल्याण संग बाँच्न सक्षम हुनेछैन।
कसरी सोफिया को कथा को जन्म भएको थियो
तपाइँको व्यक्तिगत अनुभव
सान्चेज-गार्निकाले अखबारलाई भने ए बी सी २०१ in मा जो साक्षी पहिलो व्यक्ति मा सम्पूर्ण संक्रमण प्रक्रिया को लोकतन्त्रको दिशामा फ्रान्कोको मृत्यु पछि। यस सन्दर्भमा, उनले भनिन्: "हामी एक लोकतान्त्रिक देश को रूप मा भोलिपल्ट उठेनौं, यो धेरै मेहनत र धेरै बोबिन फीता लाग्यो। अन्तमा, संविधानको साथ, हामी अगाडि बढ्नको लागी एक सम्झौतामा पुग्यौं। "
त्यस्तै गरी, स्पेनिश लेखक तथाकथित को विध्वंस को पूर्व संध्या मा बर्लिन मा थियो Antifaschistischer Schutzwall GDR द्वारा ntAntifascist संरक्षण पर्खाल। त्यस्तै गरी, जर्मन राजधानी मा उहाँले दुबै पक्षमा विरोधी ब्रह्माण्ड देखे शीत युद्ध को सबैभन्दा प्रतीकात्मक निर्माण को, S Chandmauer वा लाज को पर्खाल, यो पश्चिमी पक्ष मा बप्तिस्मा गरीएको थियो।
प्रेरणा र शैलीहरु
को रिलीज पछि सोफियाको शंका, इबेरियन लेखकले भनिन् कि उनी विभिन्न राष्ट्रिय र विदेशी लेखकहरु बाट प्रेरित थिइन् लेख्ने समयमा। उल्लेख गरिएका पाठहरु मध्ये छन् कर्नल Chabert (१1832३२) Honoré de Balzac द्वारा, मार्टिन ग्युरेकी श्रीमती (१ 1941 ४१) जेनेट लुईस र द्वारा बेर्टा इस्ला (2017) बाट जेभियर मारियास.
पक्कै पनि, सान्चेज-गार्निका तीन उल्लेख उपन्यासहरु को केहि शैलीगत विशेषताहरु मिश्रण गर्न व्यवस्थित। यी सुविधाहरु यसको तेस्रो व्यक्ति खाता को लागी स्वाभाविक रूप देखि अतीत र वर्तमान घटनाहरु को संयोजन को लागी प्रशंसनीय छन्। परिणाम एक किताब हो छ सय भन्दा बढी पृष्ठहरु हुक गर्ने शक्ति संग पाठकहरूलाई पहिलो लाइन बाट अन्तिम सम्म.
लेखक को बारे मा, Paloma Sánchez-Garnica
औपचारिक रूप मा एक लेखक बन्नु भन्दा पहिले, Paloma Sánchez-Garnica (म्याड्रिड, १ 1962 २) एक वकील को रूप मा अभ्यास, उनी कानून, भूगोल र इतिहास मा एक डिग्री छ। एसयू साहित्यिक पदार्पण 2006 मा संगै आयो महान arcanum. त्यसपछि, 2009 मा यो मान्यता प्राप्त गर्न थाले आफ्नो देश मा धन्यवाद को सफल प्रकाशन पूर्वी हावा.
त्यसपछि उनीहरु देखा परे पत्थर को आत्मा (2010), तीन घाउ (2012) र मौनताको सोनाटा (2014)। को निश्चित अभिषेक को प्रक्षेपण संगै आयो मेरो स्मरणशक्ति तिम्रो बिर्सनु भन्दा बलियो छ, २०१ Fernand फर्नान्डो लारा उपन्यास पुरस्कार को विजेता। यस कारण को लागी, लेखकले उनको अर्को किताब मा पट्टी उच्च राख्न को लागी राम्ररी तैयार गर्न कोसिस गरे: सोफियाको शंका.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » सोफियाको शंका
आसा शक्तिशाली सागर। को एक मत्स्यस्त्री देखीएको छ को लेखक संग साक्षात्कार?